Dawlada Jarmalka oo Sharci Naxdin Leh Somalida Kusoo Rogay - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Dawlada Jarmalka oo Sharci Naxdin Leh Somalida Kusoo Rogay
June 21, 2020 11:51 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews
Sharciga ayaa kala noqoneynaa Waalidka Gudniin ku sameeya Caruurtiisa
Warbaahinta gudaha ee wadanka jarmalka ayaa daaha ka qaaday sharci adag kasi oo samayntiisa leh waxaana sharcigan dowlada jarmalku ay ugu talagashay in lagu Xakameeyo waalidiinta caruurtooda u safriya Africa ama wadamo kale geeya si ay u soo gudaan. sharcigan waxa uu si qaaas ah uu u samaynaya waalidiinta haysta gabadhaha kuwaasi oo ilmaha safar dibada ah galiya si ay u soo gudaan.
Dowladda jamarku waxay cadaysay in waalidiinta talabadaas qaada ay mutaysanayaan ciqaab adag ,taas oo isugu jirta sharci kala noqosho iyo xabsi aan la cayimin inta uu noqon karo.
Warbaahinta jarmalka oo xukunkanka adag ee Dowladdu soo saartay soo xiganaya ayaa sheegay in xitaa ay dhici karto in fariin lagu soo diro (post) taa oo kaga imanaysa wasaaradaha ku shuqulka leh sida wasaaradda Qoxootiga iyo socdaalka waxana lagaa qaadaya waraysi ( Interview) xitaa hadii adan ilmahaga soo gudin, way dhici karta in waraysi Dowladdu ay ka qaado si loo ogaado safarkaga in adan dhibaato soo gaarsiin xubnaha taranka ee ilmaha aad haysatid.
Su,aalo waydiinta ayaa intooda badan diirada lagu saari doona safarkaga dibada, sababta ad u baxday iyadoona baaritaan loo diri karo gabdho hadaad haysatid si loo ogaado in ilmahaga aad soo waxyeelaysay iyo in kale.
Xukunkan adag ee isugu jira xabsi iyo sharci kala noqosho aya waxa uu si gaar ah u saamaynt karaa waalidiinta soomaliyeed ee ku nool jarmalka kuwaasi oo qaarkood aaminsan in caruurta gaar ahaan gabdhaha la gudo ay tahay mid muhiimad gaar ah leh islamrakaana dhaqan soo jireena u ahaa Soomalidda.
Dowlada Germany aya gacanta ku haysa kiisas ku saabsan waalidiin ilmahooda safar u kaxeeyay kuwaasi oo soo guday gabdhahooda.
Falanqeeye M Adan dhere Allool News Germany